भारतबाट तिल विश्वकर्माले यस बारेमा थप प्रष्ट्याउनु भएको केही कुरा
तपाईंको भनाई र अनुभवलाई केही कुरा थप गरि प्रष्ट्याउन मन लाग्यो । पहिला पहिला पेन्सनर र उसको आश्रीत (Dependents) हरुको लिमिटेड उपचार वा उपचार खर्च बेहोर्ने गर्थ्यो । केही बर्ष अघि देखि सो अभ्यासलाई विस्थापित गरि भारतीय रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका थलसेना(Army),वायुसेना(Air Force), जलसेना(Navy) का वर्दीधारी सेनाका कर्मचारीले आ-आफ्नो ओहोदा अनुसारको निश्चित तोकिएको रकम जम्मा गरिन्छ जस्तै सेनाको एउटा निम्न रैन्कको सिपाहीले रु.15000/- रकम जम्मा गरि ECHS ( Ex-Serviceman Contributory Health Scheme) कार्ड बनाउन पर्छ । त्यसमा जतिजना डिपेन्डेन्ट हुन्छन कन्ट्रीब्युसन एमाउण्ट पनि जोडिन्छ । त्यस पछि ECHS कार्ड अलगअलग व्यक्तिको नाममा इसु हुन्छ । अनि भारतको सन्दर्भमा जो रेगुलर सेवारत सेना अथवा उनका परिवारलाई उपचार गर्ने अस्पताल हुन्छ,साथै ECHS कार्ड होल्डरहरुको लागि ECHS Poly Clinic हुन्छ र त्यहा अलग्गै डाक्टर हुन्छन । त्यस पोलि क्लिनिकले ECHS सम्बन्धन (Empanelledl Hospitals) गरिएका अस्पतालहरुमा रेफर गर्छ र त्यहा उपचार गराउने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ । जति ठूलो रोग अथवा,लामो समय बस्न पर्ने अवस्था आएमा फेरि Re-refer गराई रहनु पर्ने हुन्छ । तर त्यहा पनि लिमिटेसन चाहिँ हुन्छ/राखिएको पाइन्छ । जहाँ सम्म नेपालको कुरा छ,त्यहा पनि हालै गत 1-2 बर्ष यता अभ्यासमा आएको छ ।
पोखरा,काठमाडौ केही अस्पतालमा (Empanelled) गरिएको छ । यो भयो भारत सरकारको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन सैन्य विभागको हकमा मात्र…! अब कुरा गरौ अन्य नेपालमा भएका/रहेका भारत सरकारको तर्फबाट पेन्सन प्राप्त गर्ने विभिन्न सरकारी/अर्ध-सरकारी/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अनि विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका पेन्सनरको हकमा त्यो ECHS को योजनाले समेटिएको हुदैन । राज्य सरकार बाहेकका पेन्सनरहरुको हकमा भारतमा CGHS ( Central Government Health Scheme) अन्तर्गत सेवा विस्तार गरिएको हुन्छ । अन्यथा यो सुबिधा नलिएमा हरेक महिना हालको दरमा कमसेकम रु.1000/= भारु. प्रत्येक महिना पेन्सनमा जोडेर दिइएको हुन्छ जसलाई Medical allowance भनिन्छ ।
अत : सबै भुपु ने चन्दाजीले भने जस्तो यी सुबिधा नपाउन सक्नुहुनेछ । त्यस्तै मेडिकल बाहेक पनि भारत सरकारले उपलब्ध गराइएका योजनाहरु नेपालमा रहेका पेन्सनरहरुले पाई रहेको अवस्था छैन ।
पहिलो कुरो त नेपालभरी रहेका PPO(Pension Paying Office) र SPPO( Seasonal Pension Paying Office) मा जति पनि कर्मचारी रहेका हुन्छन सबै सैनिक पृष्ठभुमिका हुन्छन र पल्टने हिसाबले काम कुरा गर्छन,रुखो बोल्ने,हप्काएर बोल्ने,अनि उनका विधवा महिलाहरु,छोराछोरी संग निम्नस्तरको भाषा प्रयोग गरि बोल्ने गरिन्छ । अनि हाम्रा भुपु हरुले पनि आफ्नो अधिकार भन्दा दयाले बक्सिस पाए जस्तो गरि चुपचाप अपमान सहेर क्याम्पमा हिडेको देखिन्छ ।
मैले माथी नै व्याख्या गरी सके नेपालमा रहेका भारत सरकारका पेन्सनर भएता पनि सबै सैनिक नियम अन्तर्गतका नभएर विभिन्न शिर्षक र नियम अन्तर्गत पर्ने हुन्छन । व्यथा धेरै छ,यहाँ वर्णन गरेर साध्य छैन ।
वैश्विक महामारी करोना भाईरस (कोभिड १९ ) संग जुध्नको लागि…